2 Samuel 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 Devid wee kpọkọta ndị ikom niile a họrọ ahọ n’Izrel ọzọ,+ puku mmadụ iri atọ. 2 Devid na ndị niile ya na ha so wee bilie gaa Beli-juda,+ ka ha wee si n’ebe ahụ bupụta igbe+ ezi Chineke, bụ́ nke a kpọkwasịrị aha, ya bụ, aha+ Jehova nke ụsụụ ndị agha,+ onye nọ ọdụ n’elu cherọb.+ 3 Otú ọ dị, ha ji ụgbọala ọhụrụ buru igbe ezi Chineke,+ ka ha wee bupụta ya n’ụlọ Abinadab,+ nke dị n’ugwu; Ọza na Ahayo,+ ụmụ Abinadab, na-edu ụgbọala ọhụrụ ahụ. 4 Ha wee buru ya n’ụlọ Abinadab, bụ́ nke dị n’ugwu—ya na igbe ezi Chineke; Ahayo nọ na-eje ije n’ihu Igbe ahụ. 5 Devid na ụlọ Izrel dum nọ na-enwe aṅụrị n’ihu Jehova, jiri ụdị ngwá egwú niile e ji osisi junipa rụọ, tinyere une+ na ụbọ akwara+ na obere ịgbà+ na sistrọm na ájà,+ na-eti egwú. 6 Ha wee bịaruo ebe nzọcha mkpụrụ nke Nekọn, Ọza+ wee matịa aka jide igbe ezi Chineke,+ n’ihi na ọ fọrọ nke nta ka ehi ahụ mee ka ọ daa. 7 Jehova wee weso Ọza iwe dị ọkụ,+ ezi Chineke wee gbuo+ ya n’ebe ahụ maka omume enweghị nsọpụrụ o mere, o wee nwụọ n’ebe ahụ n’akụkụ igbe ezi Chineke.+ 8 Devid wee wee iwe maka na Jehova wesoro Ọza oké iwe, e wee kpọwa ebe ahụ Pirez-ọza ruo taa.+ 9 Egwu Jehova+ wee jide Devid n’ụbọchị ahụ, o wee malite ịsị: “Olee otú igbe Jehova ga-esi bịa n’ebe m bi?”+ 10 Devid achọghịkwa ibute igbe Jehova n’ebe o bi n’Obodo Devid.+ N’ihi ya, Devid mere ka e buga ya n’ụlọ Obed-idọm+ onye Gat.+ 11 Igbe Jehova wee dịrị n’ụlọ Obed-idọm onye Gat ruo ọnwa atọ; Jehova wee na-agọzi+ Obed-idọm na ezinụlọ ya dum.+ 12 N’ikpeazụ, a kọọrọ Eze Devid, sị: “Jehova agọziwo ụlọ Obed-idọm na ihe niile o nwere, n’ihi igbe ezi Chineke.” Devid wee jiri ọṅụ gaa bupụta igbe ezi Chineke n’ụlọ Obed-idọm wee bugoo ya n’Obodo Devid.+ 13 O wee ruo na mgbe ndị bu+ igbe Jehova zọrọ nzọụkwụ isii, ọ chụrụ ehi na anụ mara abụba n’àjà ozugbo.+ 14 Devid ji ike ya dum na-etegharị egwú n’ihu Jehova, Devid yikwa efọd+ ákwà linin n’oge ahụ. 15 Devid na ụlọ Izrel dum wee na-eti mkpu ọṅụ,+ na-afụkwa opi,+ mgbe ha na-ebugote igbe+ Jehova. 16 O wee ruo na mgbe e bubatara igbe Jehova n’Obodo Devid, Maịkal,+ nwa Sọl, si na windo leda anya wee hụ Eze Devid ka ọ na-awụli elu na-etegharị egwú n’ihu Jehova; o wee leda ya anya+ n’obi ya.+ 17 Ha wee bubata igbe Jehova ma dọba ya n’ebe ọ ga na-adị n’ụlọikwuu nke Devid mara maka ya;+ e mesịa, Devid chụrụ àjà nsure ọkụ+ na àjà udo+ n’ihu Jehova. 18 Mgbe Devid chụsịrị àjà nsure ọkụ na àjà udo ahụ, ọ gọziri+ ìgwè mmadụ ahụ n’aha Jehova+ nke ụsụụ ndị agha. 19 O nyekwara+ mmadụ niile, ìgwè ndị Izrel dum, ma nwoke ma nwaanyị, onye ọ bụla, otu achịcha nkịtị na achịcha mkpụrụ osisi det nakwa achịcha mkpụrụ vaịn a mịrị amị,+ e mesịa, mmadụ niile lara, onye ọ bụla n’ụlọ ya. 20 Devid wee lọta ka ọ gọzie ezinụlọ ya.+ Maịkal,+ nwa Sọl, pụtara izute Devid wee sị: “Lee ka eze Izrel si mee onwe ya ka ọ dị ebube taa+ mgbe ọ gbara onwe ya ọtọ n’ihu ndị ohu nwaanyị nke ndị na-ejere ya ozi, dị nnọọ ka otu n’ime ndị ikom na-enweghị uche na-agba onwe ya ọtọ ihu na azụ!”+ 21 Devid wee sị Maịkal: “Ọ bụ n’ihu Jehova, bụ́ onye họọrọ m kama ịhọrọ nna gị na ezinụlọ ya wee mee ka m bụrụ onye ndú+ nke ndị Jehova bụ́ Izrel ka m nọ na-enwe obi ụtọ, m ga-aṅụrịkwa ọṅụ n’ihu Jehova.+ 22 M ga-ewetakwara onwe m mkparị karịa nke a,+ m ga-adịkwa ala n’anya onwe m; ndị ohu nwaanyị ahụ i kwuru banyere ha, n’anya ha ka m kpebisiri ike inye onwe m otuto.”+ 23 N’ihi ya, Maịkal,+ nwa Sọl, amụtaghị nwa ruo ụbọchị ọ nwụrụ.